KANDIDÀ DEPIOTE ANY AM-PONJA : “Tsy ny voka-pifidianana no mamaritra ny fivoahan’izy ireo”
Kandidà ho solombavambahoaka miisa efatra no manana raharaham-pitsarana ary voatery naiditra am-ponja. Raha tamin’ny fironana ankapobeny izay navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana anefa dia misy amin’izy ireo no mitarika amin’ilay toerana nilatsahany. 5 juin 2019
Anisany mampametra-panontaniana ny olom-pirenena ? indrindra fa ireo izay nifidy azy ireo ny momba ireo kandidà any am-ponja raha toa ka voafidy ho solombavambahoaka. Nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, Thierry Rakotonarivo fa tsy ny valim-pifidianana velively akory no hamaritra ny fivoahan’izy ireo ny fonja fa ny Fitsarana irery ihany no manam-pahefana mahakasika izany. Nandritra ny zotram-pifidianana rehetra dia ny anaran’izy ireo hatrany no notononina sy nampiasaina satria izy ireo no kandidà ofisialy nankatoavin’ny Céni.
Nambarany fa amin’ny fotoana hamoahana ny voka-pifidianana dia ny anaran’izy ireo hatrany no notononina na any am-ponja aza ireo kandidà ireo. “ Amin’ ny famoahana ny voka-pifidianana dia tsy maintsy ny anaran’ izy ireo no hotononina fa lany ho Solombavambahoaka izy. Aorian’ izay dia anjaran’ ny filohan’ ny antenimieram-pirenena vaovao no hanao taratasy any amin’ ny Hcc ny fahitana fototra ny fahabangan-toeran’ ilay Solombavambahoaka ao amin’ ny Antenimieram-pirenena. Ny Hcc no mamoaka ny fanapahan-kevitra. Raha mahita ry zareo fa banga ny toerana dia manambara ny Hcc fa miakatra ny lisitra faharoa ho an’ ny Distrika manana toerana roa. Miakatra kosa ny mpisolo toerana ho an’ ny Distrika manana Depiote iray », hoy ny fanazavana noentin’ny filoha lefitry ny Céni, Rakotonarivo Thierry.
40, 55 % monja ny tahan’ ny mpifidy
Latsaka ambany dia ambany ny taham-pandraisana anjaran’ ny mpifidy tamin’ ny fifidianana Solombavambahoaka natao tamin’ny 27 mey lasa teo. Araka ny antontan’isa nomen’ny Céni dia tsy misy afa-tsy 40, 55% monja izany, tsy nahatratra ny antsasa-manilan’ireo mpifidy voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana akory. Antony maro no heverina fa nahatonga izany. Lehibe indrindra amin’izany ny fahatsapan’ ny vahoaka fa very hasina tanteraka ny Antenimieram-pirenena. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo moa no nikirakira ny vokatra avy amin’ny fitanana an-tsoratra fototra ny teo anivon’ny Céni raha toa ka mbola ilay fitanana an-tsoratra dika mitovy nalaina sary no nampiasaina hatramin’izay.
Nijanona nanomboka tamin’ny alatsinainy lasa teo io ny famoahana ny firononana manerana ny nosy. Araka ny fanazavana, mandalo dingana efatra ny fikirakiran’ ny Céni ireo fitanana an-tsoratra an-taratasy tena izy. Voalohany amin’ izany ny fijerena raha tena izy ilay fitanana an-tsoratra na dika mitovy. Jerena koa ny sonia ao anatiny raha mitovy ny tao anatin’ ny Birao fandatsaham-bato. Vita ireo rehetra ireo vao mijery ny antontan’ isa azon’ ny kandidà tsirairay ry zareo. Ao amin’ ny dingana fahatelo kosa no enti-manamarina ireo antontan’ isa amin’ ny alalan’ ny fampitahana ireo fitanana an-tsoratra na an-tsary, na an-taratasy na ireo tany amin’ ny Srmv. “ Rehefa azo antoka izany rehetra izany vao irosoana ny famoahana ny vokatra vonjimaika ”, hoy hatrany ny voalaza. Araka ny tetiandro napetraky ny Céni dia tsy miova fa ny 15 jona ho avy izao no daty hamoahan’izy ireo ny vokatra vonjimaika feno.
Lavanila manta 31 kg nopotehina sy nodorana tao amin’ny biraon’ny Kaompanian’ny Zandarimaria ANDAPA (143) 22 mai 2020 Nihena 20 000 taonina ny fanondranana lojy mainty maso KALITAON’NY VOKATRA (93) 22 mai 2020 Nampidirina am-ponja vonjimaika ireo mpidongy tany FISOLOKIANA TANY TENY FENOARIVO (90) 22 mai 2020 Voasambotry ny fokonolona sy zandary ilay mpimasy mpitaiza dahalo DISTRIKAN’ANTSALOVA (81) 26 mai 2020 Hitory ilay renikely ny Talem-paritry ny mponina Faritra Sava FAMPIJALIANA ZAZAKELY AO ANDAPABE (79) 26 mai 2020 Miisa 405 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina FIVOARAN’NY “COVID-19” (69) 22 mai 2020